तिम्नाही सिस्नेरी हुँदै उत्तर बाहिनी सडक खण्डको विवाद टुंगियो (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: July 6,2019
२० असार, शुक्रवार
उदयपुर–कटारी नगरपालिकाको १ नं. वडा अन्तर्गत तिम्नाहि देखि सिस्नेरी सम्मको सडक विस्तारको लागि भनेर २ नं. क्षेत्रका साँसद सुरेस कुमार राइ द्वारा सँसदिय विकास कोष अन्र्तगत ५० लाख बजेट विनियोजन भएर तिम्नाहि देखि सिस्नेरी सम्म सडक खन्ने काम सम्पन्न भए पनि पछि तिम्नाहि गाउँमा बसोबास गर्दै आएका जनताले हामिलाई थाहा नै नभई सडक खनियो र भेलाको माइन्युटमा गरिएको हस्ताक्षर हामीले गरेको होईन भन्ने भिडियो समेत मिडियाबाट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए पछि बास्तवमा के भएको हो त ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएपछि हामी त्यस तर्पm लाग्यौ ।
बास्तविकता यस्तो रहेछ ः
योजनाको काम शुरु गर्न मिति २०७५ माघ ६ गते तिम्नाही गाउँ र सिस्नेरी गाउँका लाभान्वित उपभोक्ताहरुलाई वडा कार्यालयले कार्यालय स्थित बेलसोत मा भेला गराएका थिए । तिम्नाही बाट शुरु गरी सिस्नेरी हुँदै उत्तरवाहिणी (उत्रायणी धाम) सम्म करिव ७ किलो मिटर बाटोको लागि उपभोक्ता समिति गठन गरिनु पर्ने थियो । उक्त भेलामा सिस्नेरी बाट अधिकांश जनताहरु उपस्थित भएको भएता पनि तिम्नाहीबाट दुई चार जनाको मात्र सहभागि थियो । १ सय १८ जनाको उपस्थिती रहेको भेलामा हस्ताक्षर भने सबैमा गरिएको पाइन्छ ।
उपभोक्ता समिति गठन ः
उपभोक्ता समिति गठनको लागि अध्यक्षको चर्चा शुरु भयो । तिम्नाही देखि सिस्नेरी खण्डको सडक विशेष गरी सिस्नेरी गाउँका जनतालाई आवश्यक थियो । किन भने तिम्नाही सम्म सडक पुगिसकेको थियो सजिलै वडा कार्यालय भएको स्थान बेलसोत आउन जान सक्ने करिव ६ किलो मिटरको सडक बनिसकेको थियो । सिस्नेरी गाउका जनताले बेलसोत आउन करिव १३ किलो मिटरको दुरी आउनु पथ्र्यो । सिस्नेरीबाट तिम्नाही आउन सडक नभए पछि कमलाखोलाको जंघार २ पटक तर्नै पथ्र्यो । अनि मात्र तिम्नाही गाउँको सडक भेट्थ्यो । सिस्नेरीको जनताले ७ किलो मिटरको दुरी पैदल हिडेर तिम्नाही पुगेपछि पनि ६ किलो मिटर हिडेर मात्र बेलसोत पुग्न सकिन्थ्यो । तर सिस्नेरी बाट सिराहाको बन्दिरपुर ८ किलो मिटरको दुरी थियो । सिस्नेरीबाट बेलसोत आउनु भन्दा सजिलो बन्दिरपुर पुग्नु थियो । बन्दिुपुर पुगेपछि करिव १३ किलो मिटर मिरचैया हुदै ८ किलो मिटर पर्ने बेलसोत गाडी चढेर आउन सजिलो थियो । त्यसैले तिम्नाही देखि सिस्नेरी सडक को लागि विशेष आवश्यक्ता सिस्नेरी वासीलाई थियो । भेलामा चासोका साथ सिस्नेरीबाट उपस्थिति राम्रो थियो । सडक निर्माण उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो तर सिस्नेरीबाट अध्यक्ष पद सम्हाल्ने व्यक्ति कोही निस्कन सकेन कारण थियो बाटो निर्माण गर्न सजिलो थिएन । त्यहाँ बाँदर समेत लडेर मर्ने भिरपहराहरु खोतलेर ठूलाठूला चट्टानहरु पmुटाएर सडक बनाउनु पर्ने थियो । सिस्नेरीबाट अध्यक्ष बस्न कोही तयार नभए पछि तिम्नाहीबाट जयराम थापा र चुक्त बहादुर थापालाई कुरा चलाईयो । सडक निर्माण गर्न सोचे जास्तो सजिलो नभए पछि जयराम थापा र चुक्त बहादुर थापाकै सिफारिसमा कालिखोला निवासी दुर्गा बुढाथोकीलाई सिफारिस भयो । काम ज्यादै कठिनाई भएकोले दुर्गा बहादुर बुढाथोकीले सहमत जनाएनन् । तर चुक्त बहादुर र जयराम थापाले यो काम गर्न हामी बाट सम्भव छैन दुर्गा बहादुर बुढाथोकी नै यस्को अध्यक्ष हुँदा यो काम हुन्छ किन भने उहाँले धेरै यस्ता कामहरु सफल गरिसक्नु भएको छ निर्माण कार्यमा हामी पनि सक्दो सहयोग गर्छौ भन्ने कुराबाट अनुरोध भएपछि दुर्गा बहादुर बुढाथोकीले सहमत गरे । यसरी दुर्गा बहादुर बुढाथोकीले सचिवमा सिस्नेरी निवासी लक्ष्मी तामाङ र कोषाअध्यक्ष्मा तिम्नाही निवासी सम्झना राई लगाएत अन्य समितिहरु गठन भयो १ नं. वडा अध्यक्ष नवराज पोखरेलले बताउनु भयो ।
तिम्नाहीबासीको हस्ताक्षर किर्ते भेटिएको ः
भेलामा अध्यक्षको लागि जयराम थापा र चुक्त बहादुर थापा तयार भएको देखिन्छ । तर निर्माण कार्य कठिनाई भएको बुझेपछि आपूmहरु समितिको अध्यक्ष बस्न नसक्ने कुरा व्यक्त गरे । चुक्त बहादुर थापाले आपूm अध्यक्षहुने मनसाय रहेपछि तिम्नाहीको उपस्थितिलाई देखाउन र भेला सफल बनाउन तिम्नाही गाउँका अधिकांश को नाममा भेलाको रजिष्टरको उपस्थितिमा किर्ते गरी उपस्थिति गराएका भेलामा उपस्थिति भएकाहरु बताउँछन् । तर चुक्त बहादुरले तयार गरेको त्यसै किर्ते उपस्थितिले दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अध्यक्ष बनाए । सवैकाम सहमतिमै अघि बढ्यो । काम शुरु भयो । निर्माणको काम शुरु भएपछि केही दिन पछाडी जयराम थापा र चुक्त बहादुर थापा सहयोग गर्नबाट टाढा हुन थाल्यो । निर्माण समितिले पहिलो किस्ता बापत नगरपालिकाबाट रु. ३५ लाख ४२ हजार २ सय ४८ रुपैया ८६ पैसा निकासा ग¥यो र तिरोभरो ग¥यो । जयराम थापाले बाटोमा अनियमितता भयो र भेलामा तिम्नाहीको मान्छेहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरी योजना समितिले कामहरु गरे भनेर हल्ला गरि हिड्न थाल्यो । नगरपालिकाबाट उप मेयर भिमकुमारी राउतको टोली समेत अनुगमनमा आउनु भएको थियो । तर नयाँ भरखर निर्माण भएको सडकमा कतिभए ठाउँ अप्ठ्यारा थिए । उपमेयर आउनु भएको गाडी जान नसक्ने अवस्था थियो । उहाँले आधाबाटो पुगेपछि बाटोमा कुनै कमि नभएको जानकारी गराउनु भयो र फर्कनु भयो । तर यहाँ गाउँमा उपमेयर लाई आधा बाटो बाट फर्काइयो भन्ने हल्ला चलाए । यसरी यो कुराहरु सार्वजनिक भएको गुनासो निर्माण समितिका कोषाअध्यक्ष सम्झना राईले बताईन् ।
के भन्छन् त सिस्नेरीका गाउँलेहरु ः
हामीलाई वडा कार्यालय र नगरपालिकामा गएर सेवा लिन ज्यादै गाह्रो थियो । बन्दिपुर पुगेर बेलसोत र कटारी पुग्नु पर्ने समस्या यो बाटोले समाधान गरेको छ । यहाँ ५ दिनमा काम सकिएको छ भनेर हल्ला फिजाएका छन् तर होइ्न त्यो हल्ला गर्नेहरु जाँड रक्सी खाएर हिड्ने व्यक्तिहरु ह्ुन उनीहरुले खान नपाए पछि यो हल्ला चलाएका हुन स्थानीय हिमाली सुनुवारले बताईन् । सिस्नेरी गाउँको विकासको विरोधी हुन । यहाँ हाम्रो आँखाले देखेका छौ कत्रो कत्रो पाहाड फोडेर सडक बनाइएको छ यहाँ ४५ देखि ५० दिन भन्दा बढी मेशिन चलेको छ । हामी सत्य भन्छौ अर्का स्थानिय दिल बहादुर मगरले बताए ।
अव यसको बाँकी रकम निकाशाको प्रक्रिया के हुन्छ त ?
विकास निर्माणमा केही व्यक्तीहरुको चित्त बुझाई हुँदैन त्यसैले विवाद उत्पन्न हुन सक्छ तर पनि बाटोको अनुगमन हामीले गरीसकेको हुनाले खात्रै त्रुटी पूर्णदेखिदैन कटारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भयो । नगरको विकासको अनुगमनको प्रमुख संयोजकको भूमिकामा रहनु भएकी नगर उप प्रमुख भिमकुमारी राउत सँग हामीले बाटोको अनुगमनको विषयमा सोध्यौ “बाटो फाराकिलो र राम्रो नै भएको देखिन्छ । चट्टानहरु फोडेर बाटो बनाएको देखिन्छ खर्चिलो त पक्कै छ तर बाँकी प्राविधिकले हेर्नेहो तर हामीले हेर्दा बाटो राम्रो बनिएको देखिन्छ । अव यो बाटोले सिस्नेरी बासीको समस्यालाई समाधान गरेको बताउनु भयो ।
बाटो निर्माण सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिले भनिएको भए पनि प्राविधिक दृष्टिकोणबाट यो बाटो कुन अवस्था सम्म निर्माण भएको छ त ? भनेर नगरपालिकाको ईन्जिनियर भुपेन्द्र प्रसाद यादव सँग सोध्यौ उहाँले भन्नु भयो “अहिले सम्मको नगरपालिकामा भएको कागजात हेर्दा बाटो सम्पन्न भएको देखिएको छैन । पहिलो रनिङ बिल बापत रु. ३५ लाख ४२ हजार २ सय ४८ रुपैया ८६ पैसा निकासा गरेको देखिन्छ । बाँकी काम सम्पन्नको निवेदन साथै वडा बाट सिफारिस आईसकेपछि हामी अनुगमनमा जान्छौ र नाप अनुसार के कति खर्च भएको हो त्यस आधारम बिल भुक्तान गर्छौ तर नापमा कमी भेटिएमा जतिको काम भएको हो त्यतिको मात्र भुक्तान गरिने यादवले बताए ।
२ नाबालक छोरासहित एक दम्पतीले त्रिशुलीमा हाम्फाले
ट्याङ्करको ठक्करबाट गएराति एक जना पैदलयात्रीको मृत्यु